Fikarohana mipaka amin’ny fampandrosoana: Malagasy isan’ireo 10 misongadina aty Afrika i Juslain Raharinaivo
mercredi, 19 septembre 2018 09:43
Voafidy ho isan’ireo folo hiatrika ny dingana famaranana amin’ilay fifaninanana “Innovation Prize for Africa (IPA)” i Juslain Raharinaivo. 3000 ny mpifaninana, avy amin’ny firenena 52, tamin’ity fifaninanana ity. Hatao any Gaborone (Botswana) ny famaranana.
Malagasy ary injeniera momba ny fambolena i Juslain Raharinaivo. Efa Ben’ny tanàna Andrebakely, Distrika Amparafaravola izy. Namorona sy nampiroborobo ary nanaparitaka ny “Germoir Biodégradable” na “Tavy Bata-tany” hampitomboana ny voka-bary, na amina velarantany kely toy ny zaridaina aza.
Tsy vary ihany fa na legioma sy voankazo aza, azo ampiasana ity teknika ity. Maro ireo mpiara-miombonantoka nanome tanana azy, toy ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana, FOFIFA, FORMAPROD ary ireo tantsaha nanaiky hanaovana andrana sy nahazoana nanantanteraka andrana.
Mafy sy sarotra hoy i Juslain Raharinaivo ao amin’ny pejy fesibokiny ny lalana nodiavina nandritra izay 10 taona izay, fa izao afaka hitraka indray fa tafita amin'ny dingana manaraka izao.
Miantso ny rehetra mba hanome lanja ny mpikaroka Malagasy i Juslain Raharinaivo manomboka izao, na ireo mpikaroka matihanina, na ireo manao antselika, satria ny vahiny raha nanao izao fifaninana izao dia ny fahatsapany fa somary anjorombala ireny sokajin'olona ireny.